China kuwedzera kuwedzera simbi's kabhoni tsoka
China ichabuda nehurongwa hwekuita munguva pfupi yekuwedzera kudzikisira kabhoni tsoka yeindasitiri yesimbi munyika, musangano wepamusoro weindasitiri wakadaro neChitatu. Sekureva kweChina Iron and Steel Association, danho iri rakauya mushure mekunge nyika yapika ku ...
ne admin pane 20-07-08
Mabasa 3,200 ane hunyanzvi hwepamusoro muScunthorpe, Skinningrove uye paTeesside akachengetedzwa nekuzadzikiswa kwechibvumirano chekutengesa British Steel kumutungamiriri wechiChina wekugadzira simbi Jingye Group, hurumende yatambira nhasi. Kutengesa uku kunotevera hurukuro dzakakura pakati pehurumende, iyo Yepamutemo Re ...
MuSweden, hydrogen yanga ichishandiswa kupisa simbi nechinangwa chekusimudzira kuenderera
Makambani maviri akaedza kushandiswa kwehydrogen kupisa simbi panzvimbo iri muSweden, danho rinogona kuzopedzisira robatsira kuita kuti indasitiri igare yakasimba. Pakutanga svondo rino Ovako, uyo ane hunyanzvi mukugadzira imwe simbi inonzi engineering yesimbi, akati yakabatana neL ...
Iron Ore Tops $ 100 paKuvhiringidza
Iron ore yakawedzera kupfuura iyo $ 100 mucherechedzo sekuvharwa kutsva kwakarova pamusoro mugadziri weVale. Mucheri uyu akanzi amise mashandiro anoita account yegumi yesimbi mushure mekunge vashandi vabatira coronavirus zvichikonzera kutya kwekuwedzera kukanganisa. David Stringer weBloomberg anoshuma nezve "Bloomberg ...